Lufthansa dia manampy sidina fahavaratra bebe kokoa mankany Espana, Portugal ary Gresy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia manampy sidina fahavaratra bebe kokoa mankany Espana, Portugal ary Gresy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny toerana fialan-tsasatra maherin'ny 100, Lufthansa sy Eurowings dia manolotra toerana fialan-tsasatra bebe kokoa amin'ity fahavaratra ity noho ny teo aloha.
Lufthansa dia mampitombo ny tolotra sidina mankany amin'ny toerana fialan-tsasatra any Espana, Portugal ary Gresy
Ny sidina Lufthansa fanampiny dia hiainga any amin'ny toerana nofinofy toa an'i Kreta, Algarve ary ny Nosy Balearic
Lufthansa dia manampy sidina bebe kokoa mankany Palma de Mallorca, Valencia, Ibiza, Faro, Lisbon ary Heraklion
Ara-potoana amin'ny faran'ny herinandro lava any Corpus Christi, Lufthansa dia manolotra sidina bebe kokoa mankany amin'ny toerana mahaliana amin'ny masoandro.
Manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 6 jona dia mampitombo ny tolotra sidina mankany amin'ny toerana fialan-tsasatra any Espana, Portugal ary Gresy ny zotram-piaramanidina.
fanampiny Lufthansa ny sidina dia hiainga avy any Munich sy Frankfurt mankany amin'ny toerana nofinofy toa an'i Kreta, Algarve ary ny Nosy Balearic. Lufthansa dia manampy sidina bebe kokoa amin'ny fampandrenesana fohy any Palma de Mallorca, Valencia, Ibiza, Faro, Lisbon ary Heraklion, ohatra. Raha atotaly, manomboka ny volana jona dia afaka misafidy sidina 20 fanampiny ny mpandeha.
Ny sidina dia azo atao famandrihana izao, miaraka amin'ny safidy rebooking manintona sy malefaka.
Miaraka amin'ny toerana fialan-tsasatra maherin'ny 100, Lufthansa sy Eurowings dia manolotra toerana fialan-tsasatra bebe kokoa amin'ity fahavaratra ity noho ny teo aloha. Ohatra, i Lufthansa dia manidina tsy an-kijanona avy any Alemana mankany amin'ny tanjona roa ambin'ny folo nofinofy any Gresy. Ny mpandeha koa dia afaka misafidy amin'ny tolotra halavirana lava manintona any amin'ny toerana fialantsasatra ambony toa an'i Male (Maldives), Cancún (Mexico) na Punta Cana (Dominikanina).
Manamora ny dia hatrany i Lufthansa amin'ny alàlan'ny lalàna mifehy ny fiarovana sy ny fahadiovana avo indrindra, amin'ny fikajiana ny toe-pahasalaman'ny ankapobeny.
Ny mpanjifa dia tokony hitandrina ny lalàna mifehy ny fidirana sy ny quarantine amin'izao fotoana izao rehefa manomana ny diany izy ireo.